Garoowe: 8 Al-Shabaab ah oo min 20 sano lagu xukumay. - Wargeyska Faafiye
Garoowe: 8 Al-Shabaab ah oo min 20 sano lagu xukumay.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee gobolka Nugaal ayaa maanta xukun ku ridday 8 nin oo lagu eedeeyay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Xeer-ilaaliyaha maxkamadda ciidanka ee gobolka Nugaal Cabdikariin Firdhiye oo la hadlay Radio Garoowe ayaa sheegay in maxkamadda maanta oo Isniin ah ay xukun min 20 sano oo xarig ah ku ridday raggaasi.
Waxaa la rumeysan yahay in rag ka tirsan Al-Shabaab ay weli ku dhuumaaleysanayaan buuraleyda Galgala.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa dhowaan sheegay in uu maamulkiisu ku filan yahay in uu la dagaallamo Al-Shabaab, balse waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin taageero caalami ah.
Filed in: .Warka, Faafiye Latest news. Tags: Garoowe: 8 Al-Shabaab ah oo min 20 sano lagu xukumay.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMadaxweynaha Soomaaliya oo gaaray Baydhabo.Zimmerman's lawyers QuitItoobiyaanka oo howlgal ka sameeyay Baydhabo.Dhageyso: Hogaanka Al-Shabaab Godane Oo Baaq Ujeediyay Shacabka Soomaalida.Britain oo Danjire Cusub u Magacaawday Somalia.